Intombi yam ifuna ukuthambisa, kuse early kakhulu? | Bezzia
UToñy Torres | | Ingcebiso koomama
Inqanaba ngalinye lobomi babantwana lahlukile, likhethekileyo kwaye ngaphezu kwako konke, libukhali. Inkqubo yokuvuthwa kwabantwana yahlukile kubo bonke, nangona kunjalo, iingxaki kunye namaxesha oxinzelelo ziza kubo bonke. Ingakumbi njengoko ixesha lokufikisa lisondela, ngobuninzi ukuphazamiseka kwehomoni kunye nokutshintsha kobuntu babantwana, nto leyo eyenza abazali bangayazi kakuhle indlela yokuyilungisa.
Ukwenza izigqibo xa kufikelelwa kulutsha olufikisayo lunzima, kuba ngandlel’ ithile lubonakala lungabantu abadala, kodwa enyanisweni basengabantwana. Abantwana abaphuhlisa ubuntu babo, izinto abazithandayo kunye nezinto abazithandayo namhlanje ilungiselelwe lonke ulwazi abalufumana kwi-Intanethi. Kulapho abantwana bafumanisa khona ihlabathi limnandi kwaye linempikiswano njengelizwe le-makeup.
1 Intombi yam ifuna ukuthambisa kodwa ndicinga ukuba kuse early
1.1 Mfundise ukuthambisa
Intombi yam ifuna ukuthambisa kodwa ndicinga ukuba kuse early
Amantombazana namakhwenkwe amaninzi azithanda kakhulu izithambiso zokuzihombisa, ekubeni engabantwana yaye ayonwaba ekuxeliseni izinto ezenziwa ngabantu abadala okanye adlale ngendlela yokunxiba. Ukufaka izimonyo ngumdlalo kubo kwaye nangona kunjalo, akuyongxaki kubazali. Nangona kunjalo, Kwenzeka ntoni xa intombazana ekwishumi elivisayo isithi ifuna ukuzithambisa? Yintoni eye yaba yi-makeup yabantu abadala, ukuphuma, ukuya esikolweni okanye ukuchitha ixesha kunye nabahlobo.
Ngaloo mzuzu, eyona nto iqhelekileyo kukuba unethuku lokuzikhanyela, ukucinga ukuba usemncinci kwaye ubonakalise ngolo hlobo phambi kwakhe. Into enokwenzeka ngokungathandabuzekiyo nakubani na, nangona iseyimpazamo. Kuba xa umntwana evakalisa umnqweno kuwe, ikuvumela ukuba ubone ukuba bunjani ubuntu bakhe, evula phambi kwakho, wenza umthambo wokuthembana onokuqhawuka ngokungenakubuyiseka.
Ngoko ke, xa ufumana iindaba ezinjalo, into yokuqala kunye neyona nto ibalulekileyo kukugcina ulawulo kwaye ucinge kakuhle indlela yokwenza. Kuphephe ukuthetha izinto ezinokuyikhubekisa intombi, ungayixeleli ukuba yintombazana okanye ikhulile, kuba eyona nto inokwenzeka kukuba kwezinye izinto umxelela ukuba akaseyontombi. Phulaphula iminqweno yabo, mcele akuxelele uhlobo lwe-makeup alufunayoMxelele ukuba niza kucinga ngayo nize niyixubushe ngelinye ixesha.
Ukuba intombi yakho ifuna ukwenza izimonyo, iyakwenza, ngokuthanda kwakho okanye ngaphandle kwakho. Umahluko kukuba ukuba ikwenza ngemvume yakho, uya kuyenza ngokufanelekileyo, ngeemveliso ezifanelekileyo kwaye ngokuthe ngcembe ufunda ukuba yintoni i-makeup. Ukuba uyenza ngobuqhophololo, kuya kufuneka usebenzise iimveliso eziphantsi, ezibolekiweyo okanye ezikumgangatho ophantsi. Akayi kuyazi ukuba iqatywa njani, okanye indlela yokwenza izinto zokuthambisa imncede abukeke ngcono, kuba yiloo nto ithethwa zizithambiso.
Loo mzuzu kufuneka ufike, kuba ukuba intombi yakho ivakalisa umnqweno wayo wokubeka i-makeup, ngokukhawuleza okanye kamva kuya kufika. Ke, mncede afumane ihlabathi elihlekisayo makeup, ngoba inika umdla kwaye inokufunda izinto ezininzi ye. Thatha intombi yakho iye kuthenga iimveliso zayo zokuqala, kuba kubalulekile ukuba isebenzise izinto zokuthambisa ezifanelekileyo.
Khetha ezinye izinto ezisisiseko intombi yakho iya kuvuya ngayo, ngaphandle kwesidingo sokusebenzisa zonke iintlobo zeemveliso. Ungamthengela into yokuthambisa enombala othile, ikhrimu elulwelo kakhulu enento yokukhusela ilanga eya kukhusela nolusu lwakhe. I-lipstick kwiithoni ezipinki, apho ubona umbala othile emilebeni yakho kodwa ngendlela echuliweyo. nayo inako sebenzisa ithowuni yomhlaba okanye umthunzi wepesika emehlweni, imveliso eya kukunceda kwakhona ukufaka umbala ezidleleni zakho.
Ngezi ziseko intombi yakho inokuqalisa ibhegi yayo yokwenza izinto. Kwaye wena, uya kuba noxolo lwengqondo ukwazi oko basebenzise iimveliso zabo, ezisemgangathweni, ezifanelekileyo ngokweminyaka yabo kunye nemibala engayi kumenza abonakale emdala okanye efihliweyo. Ngale ndlela, uya kuvuya, uya kuziva eviwe, eqondwa, kwaye xa efuna ukuthetha nawe, ukuthembela okuxabisekileyo kuya kuba kudaliwe. Into engathandabuzekiyo ifanelekile, nangona oku kuyimfuneko ukuvumela intombi yakho ukuba ifake izimonyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Oomama » Ingcebiso koomama » Intombi yam ifuna ukuthambisa, kuse early kakhulu?